Ogaden News Agency (ONA) – Shir hawleed ay ku kulmeen masuulinta Hoggaanka Arrimaha Dibedda JWXO
Shir hawleed ay ku kulmeen masuulinta Hoggaanka Arrimaha Dibedda JWXO
Posted by ONA Admin	/ April 22, 2014
Waxaa bishan 20keeda, ku Kulmay Teleconference, masuulinta HAD ee dalalka Dibedda. Kulankaas oo ajendihiisu ahaa:
Qiimaynta Hawlgalada HAD iyo qorshayaashii 3da bilood ee la soo dhaafay
Guud ahaan hawwadeenada HAD ee dibedda waxay ka warbixiyen guulaha laga gaadhay diblomasiyadda iyo advocacyiga JWXO ee dibedda waxayna isla qireen in sanadka cusub hawl-galo wax ku ool ay ka qabsoomeen fidinta qaddiyadda Ogadenia iyo soo bandhiga tacadiyada cadowgu u gaysanayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenia.
Hawl-wadeenadu waxay si qoto dheer u gorfeeyeen, qorshii la degsaday sadexdii bilood ee la soo dhaafi , wixii ka qabsoomay iyo dhaliilaha jira ee loo baahan yahay in si deg deg ah loo saxo. Waxaa la isla qiray in waxbadan la qabtay, hase yeeshee dadaal dheeri ah loo bahan yahay, khasatan sanadka 2014. Waxaa kaloo ay xubnuhu u hambalyeeyeen Jaaliyaadka dibedda oo dadaal badan ka sameeyay sidii shucuubta adduunka loo gaadhsiin lahaa dhibatada ka jirta Ogadenia.
Waxay xubnaha HAD isla garteen in sanadkan xooga la saaro habaynta xogta halganka iyo sidii loogu gudbin lahaa goobaha ay khusayso. Waxaa kaloo la qorsheeyay in qoraalada la badiyo, isla markaasna culays la saaro qaabkii loo xoojin lahaa iskaashiga mucaaradka iyo Jabhabaha Itoobiya iyo dhammaan shucuubta ku nool Geeska Afrika.
Waxaa la isla gartay in dib loo soo celiyo seminaaradii iyo tababaradi xubnaha, xidhiidhkana la badiyo.
Ugu dambayntii waxay xubnuhu xuseen in cadowgu si naxariis daro ah uu ula dhaqmay shacabka Somalida Ogadenia asagoo gaadhsiiyay taariikda maamuladii gumaysiga ee ka horeeyay uusan weligood gaadhsiin, loona bahan yahay in si dhab ah loo dhaafiyo dalkeena.
Midnimo minted iskutashi allahu akbar.
Hoggaanka Arrimaha Dibedda ee JWXO